साझा मेयर बनेर विकासको सारथि बन्ने छु : नारायण वन – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, जेष्ठ ९, २०७४
रत्ननगर नगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएपछि सोमबार एकाबिहानै नारायण वनको रत्ननगर–४ शीतलचोकस्थित घरमा शुभकामना दिन आएका शुभेच्छुकको बाक्लो भीड थियो । उनी देशविदेशबाट फोनमार्फत आएका बधाई थाप्नसमेत व्यस्त थिए । शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, नेता–कार्यकर्ता तथा नगरवासीहरुले उनलाई बधाई र शुभकामना दिन भ्याइ नभ्याइ भएको छ । रत्ननगर नगरपालिकाका संस्थापक मेयरसमेत रहेका वन दोस्रोपटक पनि मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अधिकतम सदुपयोग गरी अधुरा सपना पूरा गर्ने धोको उनको छ । विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय वन कृषि संकायका विद्यार्थीसमेत हुन् । नवनिर्वाचित मेयर वनसँग रत्ननगरमा उनले गर्ने विकासका भावी योजनाका विषयमा चितवन पोष्टले गरेको कुराकानी–
१) सर्वप्रथम तपाईंलाई बधाई छ ।
– धन्यवाद । म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मलाई रत्ननगरको मेयर बनाएर काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने रत्ननगरका नगरवासी, बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुने शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, कार्यकर्ता सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । विशेष गरी पत्रकार, मिडिया हाउसहरुप्रति पनि म आभार प्रकट गर्दछु । चुनावी दौरानमा मलगायत मेरो टिमलाई सहयोग गर्ने सबैप्रति म आभारी छु ।
२) दोस्रोपटक मेयर बन्नुभएको छ, कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
– खुसी पनि छु । खुसीसँगै जिम्मेवारीबोध पनि भएको छ । नगरवासीले मलाई दोस्रोपटक जिम्मेवारी दिनुभएको छ । यो जिम्मेवारीलाई अवसरको रुपमा लिएर नगरको विकास गर्ने छु । अबको पाँच वर्ष मेरो ध्यान नगर बनाउन केन्द्रित हुने छ । एक वर्षमै नगरवासीलाई विकासको अनुभूति गराउने छु ।
३) जितको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
– यो जित सबै नगरवासीको हो । यहाँ कोही पनि हारेको छैन । सबैले मेरो जितको कामना गर्नुभएको छ । सबैले मलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुभएको हो । यो जित नगरका सबै आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीसँग साट्न चाहन्छु ।
४) तपाईं नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदमा विजयी हुनुभएको हो, मेयर भइसकेपछि आफूलाई सबैको साझा बनाउन के गर्नुहुन्छ ?
– म एमालेको तर्फबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ । चुनाव जितेपछि म साझा मेयर बनेको छु । नगरका सबै जनताको मेयर बनेको छु । नगरको कार्यसम्पादनका क्रममा म सबैलाई वन एमालेको भएर हाम्रो काम गरेन भन्ने अवस्था आउनै दिन्न । सबैको सुख, दुःखमा साथ दिन्छु, विकासको सारथि बन्छु । मेरो काममा पार्टीको गन्ध आउन दिन्न । रत्ननगरमा एमालेले मात्र निर्वाचन जितेको छैन । नेपाली काँग्रेसले पनि वडा तहमा जितेको छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्रमार्फत विकासको खाका ल्याएका छन् । एमालेले ल्याएको विकासको खाका, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले ल्याएको विकासको खाकालाई मिलाएर विकासका काम अगाडि बढाउने छु । सबै दलले रत्ननगरकोे लागि अघिसारेका योजनालाई अगाडि बढाएर रत्ननगरलाई कृषिमा आधारित सुन्दर पर्यटकीय नगर बनाउने छु ।
५) सपथ लिइसकेपछि तपाईं पहिले काम के गर्नुहुन्छ ?
– यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो । स्थानीय तह भनेपछि संस्थागत संरचना परिर्वतन हुन्छ । सुरूमा स्थानीय तहले गर्ने काम र कर्तव्यका बारेमा गहिरिएर अध्ययन गर्छु । नेपाल सरकारले स्थानीय तहले गर्ने काम प्रत्यारोपण गरिसकेपछि योजना बनाएर काम गर्ने छु । सुरूमा आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै मेरो काम सुरू हुन्छ । वडागत संरचना सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेपछि विकासको काम सुरू गर्ने योजना
छ । यो काम सकिसकेपछि सौराहाको पर्यटन विकासको लागि व्यवसायीहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेर सम्भावनाको खोजी गर्ने छु । व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर सौराहाको विकास गर्ने योजना मेरो छ । टाँडीबजार व्यवस्थापनको राजमार्ग फराकिलो बनाउने र पिठुवामा सडकको स्तरोन्नति र सिंचाइको व्यवस्था मिलाउने छु । त्यसका लागि पञ्चवर्षे अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने छु ।
६) चुवानी घोषणपत्रमार्फत तपाईंले रत्ननगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । स्मार्ट सिटी बनाउने तपाईंको योजनाचाहिँ के हो ?
– रत्ननगरलाई साच्चिकै स्मार्ट सिटी बनाउन सकिन्छ । हामीसँग मुलुककै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यस्थल सौराहा छ । कृषिको सम्भावना बोकेको पिठुवा पनि हामीसँग छ । सौराहाको पर्यटनलाई नगर सबै ठाउँहरुमा विस्तार गरी रत्ननगरलाई ग्लोबलाईजेसन गर्ने मेरो योजना छ । स्मार्ट सिटीका पनि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन् । विज्ञताहरुसँग अन्तक्र्रिया र सुझाव लिएर रत्ननगरमा स्मार्ट सिटीको अवधारण सुरू गरिने छ ।
७) रत्ननगरको विकासको लागि तपाईंले के के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
– रत्ननगर सम्भावना नै सम्भावना भएको नगर हो । पर्यटन र कृषिको सम्भावना यहाँ छ । सुन्दर पर्यटकीय सहर बनाउन सुरूमा सबै बस्तीहरुलाई सडक सञ्जालमा जोडने काम गर्छु । विकासको पहिलो आधार सडक हो । सडक राम्रो भयो भने बस्ती–बस्तीको विकास गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको पहुँच नगरवासीको घरघरमा पु¥याउँछु । युवाहरुलाई रोजगारको लागि रत्ननगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा लागू गर्ने छु । रत्ननगर अस्पतालको स्तरोन्नति गरी पूर्वी चितवनवासीको आशाको केन्द्र रत्ननगर अस्पताललाई बनाउने छु । रत्ननगर अस्पताललाई विश्वासिलो बनाएर सबैले उपचार गर्ने स्थलको रुपमा विकास गर्ने छु । यो अस्पतालमा सुरूमा ५१ शैयाको बनाएर केही समयपछि १०० शैयाको बनाउन मेरो पर्यत्न रहने छ । अब रत्ननगरका कोही पनि उपचार नपाएर मर्न पर्दैन । सौराहामा रिङ रोड बनाउने योजना छ । ग्रामीण बस्तीहरुलाई सौराहाको पर्यटनसँग जोडेर आम्दानीको स्रोत बनाइने छ । सौराहाकै विकासको लागि गुरूयोजना बनाएर काम गर्नेछु । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सडक सुधार, सेवा गुणस्तरीय, मनमोहक वातावरण बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना रहेको छ । पिठुवालाई आवास र कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने छु । साविक रत्ननगरको विकासको लागि सडकको स्तरोन्नति, ढल निर्माण, सौराहाचोकमा आर्कषक प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने छु । रत्ननगरका सबै बस्तीहरुमा खानेपानी पुग्न सकेको छैन । रत्ननगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको क्षेत्र विस्तार गरी सबै बस्तीहरुका खानेपानी पु¥याउने छु । महिला, बालबालिका, गरिब तथा सुकुमबासीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मेरो काम लक्षित हुने छ ।
८) यहाँका सुकुमबासीहरुले तपाईंप्रति ठूलो भरोसा गरेका छन्, सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको लागि के गर्नुहुन्छ ?
– रत्ननगरका सुकुमबासी समुदायले भोगेको समस्या मलाई राम्ररी थाहा छ । सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन र लालपूर्जा वितरण यहाँको प्रमुख चुनौती हो । सुकुमबासी समुदायको हितका लागि म जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार छु । नेपाल सरकारले दिएको अधिकारको दुरुपयोग नगरी सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन र लालपुर्जा वितरणको काम सुरू गर्ने छु । लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूह सहकार्य गरेर बस्ती व्यवस्थापनको काम गर्ने योजना छ । तपाईंहरु ठुक्क हुनुहोस्, तपाईंहरुले मप्रति गरेको भरोसा तोड्दिन । तपाईंहरुकै हितमा काम गर्छु ।
गैँडाकोटमा किन हल्लियो कांग्रेसको जग
खिया लागेको महाभियोग